योगमाया एक क्रान्तिकारी विराङ्गना « Emakalu Online
योगमाया एक क्रान्तिकारी विराङ्गना
ताराबहादुर बुढाथोकी (पाख्रिबासे कान्छो)
योगमाया नाम आज नेपाली समाजमा ब्रान्ड बनेको छ । सेलिब्रेटी बनेका छन् । उनका तस्बीरहरु, प्रतिमाहरु पुरुष प्रधान नेपाली समाज त्यसमा पनि हिन्दु–आर्य समुदायकी छोरी बुहारी थिइन् योगमाया । राणा शासनकाल, पूर्वी पहाडको नेपाले डाँडाको ब्राम्हण परिवार वास्तवमै त्यतिबेला एउटी महिला त्यो परिवारमा क्रान्तिकारी थिइन् भन्दा हाँसो उठ्न सक्छ । पिता श्रीलाल पाध्ये र माता चन्द्रकला न्यौपानेको जेठी छोरीको रुपमा १९२४ मा भोजपुर जिल्लाको नेपाले डाँडामा योगमायाको जन्म भएको थियो । (धर्म नभुटी कर्म चलाउने) तात्कालिन परम्परा अनुसार १९३२ फागुन महिनामा भोजपुरकै ईश्वर पाध्य कोइरालासँग उनको विवाह भयो । विवाह गरेको वर्ष योगमायाको उमेर ८ वर्षको मात्र थियो । विहे गरेपछि केही वर्ष माईत छाड्ने परम्परा थियो ता पनि उनलाई लामो समय माईत जानबाट पति र ससुसराहरुले वञ्चित गरेका थिए ।
एक दिन बाघले गोरु खाएको निहुँमा योगमायाले सासुबाट कडा यातना पाइन् । सितला (माइखटिरा)ले उनको जेठाजुको मृत्यु भएपछि उनकी जेठानीले पाएका कष्टसाध्य यातनाहरु उनले देखेकै थिइन् । एकातिर परिवारमा महिला हिंसा बढ्दै थियो । अर्को तर्फ उनको मन भित्र विद्रोहको मिटर चढ्दै थियो । उनी ११ वर्षको उमेरमा राती घरबाट भागेर दुई दिनको पैदल यात्रा पूरा गरी माइत पुगिन् । रातभरको निद्रा र २४ घण्टाको थकाईले लखतरान उनी दुई वर्षसम्म पतिका घरमा फर्कन मानेनन् ।
आमा बाबुले घर जा भनेर कचकच गरेको र लोग्नेले अर्कै बिहे गरेको सुने पछि उनले पनि कँडेल थरका ब्राम्हणसँग बिहे गरिन् । असाममा कँडेलसँग सानन्द बाँचेको पनि दैवलाई सह्य भएन । उनलाई वैधव्यले छोप्यो । त्यसपछि भरिलो जवानीका माग अनुसार उनले डेटेल जैसीसँग बिहे गरिन् । कँडेलबाट बाटुली, डोटेलबाट नैनकला छोरी जन्मिए पनि योगमायामा सन्तहरुको प्रभाव पर्न गयो । समाजमा व्याप्त शोषण, अन्याय, अत्याचार, सुदखोरी र हिंसाले उनलाई नराम्ररी पिरोले कै थियो । ४० वर्षको उमेरमा उनी दोस्रो पटक एकल बन्न पुगिन् । सेतो धर्ति बनेकी योगमाया छोरी नैनकलाका साथ भोजपुर १९७९ मा आइन् ।
योगमाया भोजपुर आईपुग्दा उनी विद्रोही बनीसकेकी थिइन् । उनीभित्र विद्रोह चेत पाउनुका प्रमुख दुई आन्तरिक कारण देखिन्छन् ः १. सामाजिक २. पारिवारिक सामाजिक कारण अन्तर्गत बाल विवाह, अनमेल विवाह र बुहारीलाई हिंसा गर्ने तात्कालिन प्रचलन । पारिवारिक कारणमा परिवारमा वेमेल र दुईदुई पटकको वैधव्य । अर्को बाह्य कारण भने देशविदेशसम्म फिरनता भई सन्तमहन्त समाज सुधारकहरुको सत्संगत र त्यसको प्रभाव ग्रहण ।
योगमाया भोजपुर पुनरागमन भईसकेपछि क्रान्तिका बाछिटाहरु देखा पर्न थाल्छन् । परिवर्तनका लागि तरङ्ग जुनसुकै क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । धर्मका नाममा शोषण गर्ने पुरोहित, घुसखोर, कामचोर कर्मचारी, सुदखोर, ठग व्यापारी, आँखामा पट्टी बान्ने न्याय कर्मी, आडम्बरी एवं खोक्रा दर्शन बाँड्ने साधुसन्त कोहि बाँचेनन् । सबको सातो उड्यो । तर्क, बहस, प्रमाण र व्यवहारिक निष्कर्षका आधारमा भ्रष्ट पक्षलाई निष्तेज मात्र गरिनन्, त्यसका सट्टा सकारात्मक विचार र उत्पादनमुखी शोषणमुक्त चिन्तन तथा व्यवहार पनि स्थापित गरिन् ।
यसरी हरपल हरमोडमा उनले विकृति विसंगति विरुद्ध शंखघोष गरिन् र क्रान्तिका ज्वालामुखि बनेर परिवर्तनका झिल्का निकालिन्, अन्यायको संसारलाई हल्लाएर चिराचिरा पारिन् ।
मुलत : तत्कालिन समाजमा कलङ्क, सतीप्रथा विरुद्ध उनको विद्रोह सुनामी जस्तै रह्यो । योगमाया क्रान्तिको आँधीले राणाको दरबारसम्म हल्लाएको सनसनीपूर्ण इतिहास छ । १५ वर्षका युवतीको ६०÷७० वर्षका विधुरसँग हुने अनमेल विवाह, पुरुष र महिलाको उमेर कम्तीमा १० वर्षको अन्तर हुनुपर्ने, छोरीको मासिक धर्म नभै २० वर्षका केटासँग विवाह हुने (धर्म नभुटी कर्म चलाउने) जस्ता प्रथाका कारण ४० प्रतिशत महिला कलिलै उमेरमा विधवा बन्ने, २० प्रतिशत ४०/५० कै उमेरमा विधवा बन्ने विवशता आउनु स्वाभाविक थियो ।
बहुविवाह पनि हुने भएकाले जेठीपटीका छोराहरुले कान्छीआमाको सम्पत्तीमा आँखा लगाउने हुनाले उनलाई पतिसंगै जलाउने जोड गर्थे सायद । पछि यो धर्मका रुपमा संस्कारित भयो ।
कुलिनताको प्रमाण दिन जबरजस्त घिच्याएर लगिने, बाँधेर लगिने र सती नगए घरबाट निष्कासन, हिंसा, सामाजिक बहिस्कार, सती लैजादा पतिको शवयात्रामा संगै पत्नी हिडाइन्थ्यो । सके विहेमा जस्तै बाजागाजा बजाइन्थ्यो । घाटमा चिता बनाइन्थ्यो । चिता वरीपरि घुम्न लगाइन्थ्यो । कपडा फुकाल्न लगाइन्थ्यो । जीउ भरी तेल दलिन्थ्यो र पतिको पाउ ढोगेर मृत पतिका दुवै पाउ सतीले आप्mना काखमा राखेर पलेटी मारेर बस्नु पथ्र्यो । अनि दागबत्ती दिइन्थ्यो र चितामा आगो लगाइन्थ्यो । मृत रहेसम्म जीवित मान्छे पोलिनु पथ्र्यो । कतै हामफालेर भाग्यो भने मलामीहरुले खेदीखेदी कुटेर मारेर भएपनि जलाउँथे । सानासाना नानीहरु आमा भनेर घरमा रुँदै हुन्थ्यो । छिः कत्ति निन्दनीय, विभत्स, घृणित र हृदय विधारक थियो त्यो चलन रु त्यसैले योगमायाहरु जन्मनु र जाग्नु जरुर थियो ।
योगमायाले सतीप्रथाको अन्त्यका निमित्त ठाउँठाउँमा सचेतना, छलफल, कविता प्रस्तुत, जुद्धसमशेर सामु विन्ति पत्र जाहेर गरेर संगठित आन्दोलन गरिन् । गाउँगाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ भनेझैं । यतिले मात्र नपुगेर १९९८ असार ३१ गते ७४ वर्षको उमेरमा ६८ जना आन्दोलनकारीहरु तयार गरेर अरुण नदीमा जलसमाधि समेत लिइन् ।
राणा सरकारलाई सतीप्रथा तथा अन्य समस्त कुप्रथाको अन्त्यका खातिर जलसमाधि लिने जानकारी गराएरै उर्लदो अरुणको भेलमा समाधि लिएको हुनाले यो घटना नेपालको सामाजिक रुपान्तरणको इतिहासमा कोशेढुंगा पनि हो । तर त्यो दिनदेखि सतीघाटमा कुनै नारीलाई जीउँदै जल्न सती जानु परेको छैन ।
योगमायाले मान्छेलाई किनेर दास बनाउने प्रथाको पनि विरोध गरिन् । जातिय भेदभाव र छुवाछुतको पनि घोर भत्सना गरिन् । उनले विरोध गरिरहेकै सन्दर्भमा १९८२ मा तात्कालिन सरकारले दासप्रथाको अन्त्यको घोषणा ग¥यो । युगौंदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको कुप्रथालाई हटाउनु त्यो पनि सुधार र परिवर्तनका कुरा ग¥यो भने मृत्युदण्डसम्म दिन पछि नपर्ने निरङ्कश शासन रहेको बेला चानचुने काम थिएन ।
योगमाया १९९५ कार्तिक २७ मा जेल परिन् । सिंगो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पूर्वी पहाडमा योगमायाको सक्रियताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस अर्थमा उनी राजनितिज्ञ पनि हुन् भन्न सकिन्छ । योगमाया साहित्यकार पनि थिइन् । शार्दूल विक्रिडित र सवाइ छन्दमा उनका अनेक फुटकर कविता छन् । सवाई छन्द र चुड्के भजनका लयमा उनका “सर्वार्थ योगवाणी” डा। मातृका तिम्सिनाले प्रकाशित पनि गरेका छन् । समाज सुधार, राजनितिक परिवर्तन, साहित्य सिर्जना जस्ता महानतम् क्षेत्रमा गहनतम् योगदान दिने योगमाया नेपालकी एक विशिष्ट नारी प्रतिभा हुन् । बहुमुखी प्रतिभाका धनी योगमाया अदम्य साहस, दृढ अठोट र बौद्धिक तिक्ष्णताकी त्रिवेणी थिइन् ।
आज योगमाया हामीसँग छैनन् । तर उतिबेला उनले फेरेका प्रत्येक सास, बोलेका वाणी, टेकेका प्रत्येक कदम आज हाम्रा निम्ति जीउने आधार र मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेका छन् । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारी नगरपालिका छेउमा योगमाया चोक घोषणा गरिएको छ । मातृका दाईले योगमाया र सर्वार्थ योगवाणी पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् ।
निलम कार्की निहारिकाले योगमाया उपन्यास लेखेकी छिन् । पछि नाटक, चलचित्र बनलान् । केही ठाउँमा सालिक होलान् । अनि नेपाल सरकारले अरुण उपत्यकामा योगमाया विश्वविद्यालय स्वीकृत गरेको छ । तर जम्मै योगमायाका नाममा व्यक्तित्व विकास गर्ने, पुरस्कार पाउने र योगमाया माथि राजनिति गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने मात्र दाउपेजमा सिमित भएभने उनी प्रतिको सच्चा सम्मान हुन सक्दैन ।
उनले चाहेका सुधारका निम्ती प्रत्येक नागरिक तयार नभएसम्म, सरकार दत्तचित्त नभएसम्म योगमाया व्यक्ति र झुण्डहरुको मागीखाने भाँडो मात्र बन्नेछन् । विश्वविद्यालय स्वीकृत गर्न सजिलै भयो होला, स्थापना गर्नु र सञ्चालन गर्नु त्यति नै सहज छैन । यसतर्फ सबैको सचेत एवम् एकात्मक प्रयास योगदानको खाँचो छ । योगमायाका महान् कदमहरु हाम्रा प्रेरणाका स्रोत बनिरहुन् ।
किमाथाङ्का डायरी २ : चिनले राहत पठाउँछ तर, नेपाली चेली..
सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको सन्दर्भमा मेरो अनुभूति
सन्दर्भ : सुरक्षित गर्भपतन दिवस
नेपालको न्यायलय र सामाजिक न्याय प्रणाली